WAR CUSUB: Sirdoonka 100 dal oo Brazil iskugu tegey! (Maxaa galay halkaas?) – Gool FM
WAR CUSUB: Sirdoonka 100 dal oo Brazil iskugu tegey! (Maxaa galay halkaas?)
Raage July 21, 2016
epa05383745 Brazilian Ministers of Defense Raul Jungmann (L) and of Justice Alexandre de Moraes (R) during a seminary organized by Brazilian Armed Forces in Brasilia, Brazil, 22 June 2016. Jungmann announced the counrty designed a security operative for the upcoming Olympic Games Rio 2016 whithout underestimating the threat of terrorism. EPA/FERNANDO BIZERRA JR
(Brasilia) 21 Luulyo 2016 – Wakiillada sirdoonka ilaa 100 waddan ayaa la shaqayn doona booliiska federaalka ah ee dalkaasi Brazil si ay u hubiyaan amaanka ciyaaraha olombikada xagaaga ee Rio Di Janeiro.
Ciyaarahan ayaa furmi doona 5 Agoosto ilaa 21-ka isla bishaasna xirmi doona, waxaana tillaabadan cusub ku dhawaaqay Wasiirka Wasaaradda Cadaallada Alexandre de Moraes.
Waxaa intaa dheer in jidadka la dhigi doono gawaari gaashaaman iyadoo sidoo kale garoomada la dhigi doono difaaca lidka dayuuradaha si loosoo rido dayuuraddii warkeeda la bixin waayo.
Sidoo kale waxaa tuulada Olombikada ee ay deggan yihiin ciyaartooyda lagu xiri doonaa hir-baacyo tashwiish ku furi doona anteenooyinka telefoonnada si aan loogu adeegsanin bambooyinka remote-ka laga hago.
” Waannu haysannaa agabkan, balse si aan kala sooc lahayn uma jaam garayn doonno telefoonnada, si aannu weerar u baajinno. balse caqli baynu adeegsan doonnaa oo waxaannu raadin doonnaa xogta rasmiga ah kahor inta aynaan qalabka adeegsanin’ ayuu yiri Andrei Rodrigues, madaxa amaanka dhacdooyinka waawayn oo hoos taga Wasaaradda Cadaalladda Brazil.
Pep Guardiola oo xaqiijiyay in kooxdiisu ay doonayso saxiixa Leroy Sane
TARTANKA GOBOLLADA: Gobolkee loogu codeeyay inuu koobka hanan karo? (Codeeynta akhristayaasha GoolFM.net)